Vokatry ny fitorahana bilaogy amin'ny fikarohana organik | Martech Zone
Fiantraikan'ny fitorahana bilaogy amin'ny fikarohana organik
Talata, Novambra 21, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Olona sy orinasa maro no tsy manaiky ny herin'ny fitorahana bilaogy ho toy ny fivoahana manan-danja amin'ny Marketing. Tombony iray tiako omena anao ny maha-zava-dehibe ny fikarohana biolojika (olona manandrana mitady anao amin'ny alàlan'ny motera fikarohana) sy ny vokatry ny fitorahana bilaogy.
Manana tranokala roa hampitahana aho, Calculator fandoavana ary Momba ny fitaomana sy ny fampidirana. Payraise Calculator dia tranokala mijanona izay tsy ahitsy matetika ny atiny. Misy teny fikarohana manokana izay hita matetika hatrany ny Calculator Payraise. Ho hitanao izany amin'ny valin'ny fikarohana biolojika amin'ny alàlan'ny Google eo amin'ilay tranonkala rehefa mandeha ny fotoana ao amin'ity tabilao manaraka ity. Nanao Search Engine Optimization vitsivitsy aho ary nanova ny atiny vao tsy ela akory izay.
Calculator Payraise - Votoatiny miorim-paka
Satria miova isan'andro ny atin'ny On Influence, dia miova hatrany ny habetsaky ny teny fikarohana. Ny atiny nampidirina dia mahatonga ny tranonkala 'ho hita' miaraka amin'ny teny fikarohana sy teny manan-danja. Satria mitohy miova ny atiny, nozahan'ny motera fikarohana matetika ny tranokala ary naverina natondro indray arak'ireo fikarohana ireo. Mariho ny fiovana amin'ny fikarohana biolojika amin'ny alàlan'ny Google rehefa mandeha ny fotoana:
Amin'ny fitaomana sy ny mandeha ho azy - Votoatiny Dynamic
Raha te hanao an'io tatitra io ihany ianao amin'ny alàlan'ny Google Analytics, azonao atao ny mankanesa any amin'ny Source Referring (amin'ity tranga ity, Google), mametraha ny datin'ny datinao ary avy eo tsindrio ny zana-tsipìka roa ary safidio ny 'Data Over Time':
Mampiasà Google Docs miaraka amin'ny WordPress?
Tongasoa eto amin'ny tontolon'ny bilaogy, Paul